Sitemap-Jiangshan ဟွာအာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား နည်းပညာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
အကြောင်း ငါတို့ | လက်မှတ် | မိတ်ဖက်များ
စံ မော်ဒယ် ၏ APG စက်: Epoxy ဗဓေလသစ် ဟိုက်ဒရောလစ် အလိုအလျောက် ဖိအား Gelating စက်ယန္တရား | အများစုမှာ စျေးရောင်း မော်ဒယ် ၏ APG စက်ယန္တရား နှစ်ဆ ဘူတာရုံ Epoxy ဗဓေလသစ် APG ညှပ် စက်ယန္တရား | ပြည့်သည် အလိုအလျောက် Epoxy ဗဓေလသစ် APG ဆေးထိုး စက်ယန္တရား Servo နှင့် PLC ထိပါ မျက်နှာပြင် ထိန်းချုပ်မှု | အထူး အမျိုးအစား APG စက်ယန္တရား ၆ ဘက် Core-Puller Epoxy ဗဓေလသစ် APG မှို စက်ယန္တရား | စံ APG ညှပ် စက်ယန္တရား | ဘူတာနှစ်ခု APG ညှပ် စက်ယန္တရား
APG ဆေးထိုး မှို | Epoxy ဗဓေလသစ် ဆေးထိုး မှို | Insulator မှို
ကြောက်စိတ် ကွိုင် အကွေ့အကောက်များသော စက်ယန္တရား | CNC ကွိုင် အကွေ့အကောက်များသော စက်ယန္တရား | ထရန်စဖော်မာ ကွိုင် အကွေ့အကောက်များသော စက်ယန္တရား | အလိုအလျောက် လက်စွပ် အကွေ့အကောက်များသော စက်ယန္တရား Multi-strand အကွေ့အကောက်များသော အဘို့ မှန် CT
ရောစပ်ခြင်း Epoxy ဗဓေလသစ် စက်ယန္တရား | ရောစပ်ခြင်း Frame
အလိုအလျောက် ထရန်စဖော်မာ အကွေ့အကောက်များသော စက်ယန္တရား | Linear ထရန်စဖော်မာ အကွေ့အကောက်များသော စက်ယန္တရား | ဗို့အား ထရန်စဖော်မာ အကွေ့အကောက်များသော စက်ယန္တရား | switching ပါဝါ ထောက်ပံ့ရေး | CNC ထရန်စဖော်မာ အကွေ့အကောက်များသော စက်ယန္တရား
အနိုင်အထက် Casting မှို | ဗို့အား ထရန်စဖော်မာ Casting မှို | အနိမ့် ဗို့အား ထရန်စဖော်မာ Casting မှို | လက်ရှိ ထရန်စဖော်မာ Casting မှို
အိန္ဒိယ ဖောက်သည်များ လည်ပတ်ခဲ့သည် ဟွာ ဘို့ ဝယ်သည် APG စက် နှင့် မှို။ | ဝါဒဖြန့်ခြင်း အစီအစဉ် မူကြမ်း ဘို့ ထုတ်ကုန် အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ၏ Epoxy ဗဓေလသစ် APG ပစ္စည်းကိရိယာ အလိုအလျောက် Feedin | အီရန် ဖောက်သည် လည်ပတ်ခဲ့သည် ငါတို့ စက်ရုံ ဘို့ ဝယ်သည် APG စက် နှင့် မှို! | တင်ပို့ | ကြိုဆိုပါတယ် အီရန် ဖောက်သည်များ ရန် အလည်အပတ် ဟွာ | 8, ဇွန်လ, 2017â€ "Huaao ကုမ္ပဏီ ကျင်းပခဲ့သည် နှစ်ပတ်လည်နေ့ အခမ်းအနား | လိုင်း စစ်ဆေးခြင်း | နိုင်ငံခြား ဖောက်သည်များ အလည်အပတ်ခရီး ဟွာအာ APG စက် နှင့် epoxy ဗဓေလသစ် မှို | APG နည်းပညာ ဗို့အား ထရန်စဖော်မာ မှို2in 1 | အသစ် မှို ၏ ဗို့အား ထရန်စဖော်မာ သတ္တုများ | ဟွာအာ ကုမ္ပဏီ - အေ ခက်တယ် အလုပ် အသင်းအဖွဲ့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ၏ စွမ်းအင်, R&D စွမ်းရည် | Epoxy ဗဓေလသစ် မှန် CT / Pt ထုတ်လုပ်မှု မျဉ်းကြောင်း တပ်ဆင်ခြင်း in ကိုလံဘီယာ
The အသစ် မော်ဒယ် CNC ထရန်စဖော်မာ အကွေ့အကောက်များသော စက် အသုံးပြုသည် ကျိုက်ထီးရိုး ထရန်စဖော်မာs in လျှောက်လွှာများ | Casting မှို ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦး တည်ချက် | Epoxy ဗဓေလသစ် အလိုအလျောက် ဖိအား ဂျယ်လ် ဟိုက်ဒရောလစ် APG ညှပ် စက် | အလိုအလျောက် ဖိအား gelation လုပ်ငန်းစဉ် စက် epoxy ဗဓေလသစ် ကိုးကား ထုတ်လုပ်သူများ စက်ရုံ | Insulator ဖွဲ့စည်းခြင်း စက်ယန္တရား ထုတ်လုပ်သူ ကိုးကား စက်ရုံ | ဗဓေလသစ် ထရန်စဖော်မာ မှို စက်ယန္တရား နှင့်အတူ အကောင်းဆုံး ကိုးကား in တရုတ် ထုတ်လုပ်သူများ | apg ဟိုက်ဒရောလစ် ပုံသွန်း စက် ဘို့ ။ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း ကိုးကား စက်ရုံ | ဆီလီကွန် ရော်ဘာ ဆေးထိုး ပုံသွန်း စက် နှင့်အတူ အနိမ့် စျေးနှုန်း ကိုးကား ထုတ်လုပ်သူများ | epoxy ဗဓေလသစ် apg သတ္တုများ စက် ထုတ်လုပ်သူ စက်ရုံ ကိုးကား | မှို နှင့် ညှပ် စက်တွေ ဘို့ ချမှတ်ခြင်း ပေးသွင်းသူများ ကိုးကား စက်ရုံ | Semi အလိုအလျောက် ဆေးခန်း စက်ယန္တရား ဘို့ ရောင်းမည် စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူများ ကိုးကား | epoxy ဗဓေလသစ် ဖိအား ဂျယ်လ် ပုံသွန်း စက် ဘို့ ထုတ်လုပ်သူများ ကိုးကား စက်ရုံ | ထရန်စဖော်မာ ဘုရှ် စက်ယန္တရား ဘို့ ရောင်းမည် ကိုးကား ထုတ်လုပ်သူများ | အလိုအလျောက် ဖိအား gelation စက် ဘို့ epoxy ဗဓေလသစ် ကိုးကား ထုတ်လုပ်သူများ | ဗဓေလသစ် လွှဲပြောင်း ပုံသွန်း စက် ထုတ်လုပ်သူ ဘို့ eproxy-resin ကိုးကား | လေဟာနယ် ဖိအား gelation ပစ္စည်းကိရိယာများ စက်ရုံ ဘို့ အဆိပ်အတောက် အိုးအိမ် ထုတ်လုပ်သူများ | ကြွေထည် insulator ချမှတ်ခြင်း စက် ထုတ်လုပ်သူများ ကိုးကား စက်ရုံ | insulator ချမှတ်ခြင်း စက် နှင့်အတူ ကြွေထည် ကိုးကား စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူများ | epoxy insulator APG ညှပ် စက် ဘို့ ထုတ်လုပ်သူများ ကိုးကား | The အခန်းကဏ္။ ၏ ဗို့အား ထရန်စဖော်မာ နှင့် က ဘေးကင်းလုံခြုံမှု ၏ အသုံးပြုသည် | အားသာချက်များ ၏ ဖိအား ဂျယ်လ် ဖွဲ့စည်း ဘို့ သုည ရာထူး ဗို့အား transဘို့me | ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နည်းလမ်း ဘို့ တပ်ဆင် စားပွဲတင် ၏ မြင့်သည် ဗို့အား transဘို့mer သတ္တုများ မှို
ပင်လယ်ရပ်ခြား တပ်ဆင်ခြင်း insulator ချမှတ်ခြင်း စက် | APG ညှပ် စက် နှင့် မှို အောင်မြင်စွာ ထည့်သွင်းတပ်ဆင် in အိန္ဒိယ
ဘာ ဖြစ်ကြသည် မင်းရဲ့ အားသာချက်များ compဖြစ်ကြသည် နှင့်အတူ မင်းရဲ့ ပြိုင်ဘက်လား | ဘယ်လိုလဲ အများကြီး ရက်ပေါင်း မင်း လိုအပ်တယ် ရန် install လုပ်ပါ က ပစ္စည်းကိရိယာ? | ဘယ်လိုလဲ အများကြီး ဝန်ထမ်းများ ပြည်ပမှာ မင်း ပို့လိုက်ပြီ ရန် install လုပ်ပါ က ပစ္စည်းကိရိယာ? | လုပ်နိုင် မင်း ပို့ပါ မင်းr ဝန်ထမ်းများ ရန် install လုပ်ပါ က ပစ္စည်းကိရိယာများ ဘို့ ငါတို့လား | လုပ်နိုင် ငါ သာ ဝယ်ပါ အချို့ အပို အစိတ်အပိုင်းများ မှ မင်းလား | အလိုတော် မင်း တက်ရောက်ပါ က မျှတ ရန် ပြ မင်းr ထုတ်ကုန်များ? | လုပ်နိုင် မင်း ပို့ပါ မင်းr ပစ္စည်းကိရိယာများ ရန် ငါ့ ဂိုဒေါင် in ဂွမ်чжоу? | ဘယ်လိုလဲ ကြာရှည် က ကြာသည် မင်း ရန် ပေး က ဒီဇိုင်း ရွေးချယ်စရာများ ဘို့ ငါတို့လား | ဘာ ဟုတ်တယ် မင်းရဲ့ ထုတ်ကုန်များ စံသတ်မှတ်ချက်? | ဘယ်လိုလဲ လုပ်တယ် မင်း ထုပ် က ပစ္စည်းကိရိယာ? | လုပ်နိုင် မင်း လုပ်နိုင် ဒီဇိုင်း က ပစ္စည်းကိရိယာများ အရ ရန် ငါတို့ အရွယ်အစား? | ဘယ်လိုလဲ ကြာရှည် က အလိုတော် ယူ မှ ရှန်ဟိုင်း ရန် မင်းရဲ့ facရန်ry? | ဘယ်မှာလဲ ဟုတ်တယ် မင်းရဲ့ စက်ရုံ ဘယ်မှာလဲ | လုပ်ပါ မင်း ပေး အခမဲ့ အပို အစိတ်အပိုင်းများ ? | လုပ်ပါ မင်း ရှိသည် အသေးစိတ် နှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တပ်ဆင်ခြင်း လက်စွဲလား | အကယ်၍ OEM ဟုတ်တယ် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါသလား | ဘာ ဟုတ်တယ် မင်းရဲ့ သက်တမ်း ၏ ငွေပေးချေလား? | ဘာ ဟုတ်တယ် မင်းရဲ့ MOQ? | Are မင်း က trကding compကny ဒါမှမဟုတ် က mကnufကcturer? | ဘယ်လိုလဲ ကြာရှည် ဟုတ်တယ် မင်းရဲ့ ပေးပို့ခြင်း အချိန်?